ထုတ်ကုန်များ > 4-Amino-3-Iodo-1H-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidine (151266-23-8)
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း, CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် [4-D ကို] Pyrimidine (3-1-3,4) 151266-အမိုင်နို-23-Iodo-8H-Pyrazolo အမြောက်အမြား synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်
SKU: 151266-23-8 အမျိုးအစား: Heterocycles
4-Amino-3-Iodo-1H-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidine (151266-23-8) video
4-Amino-3-Iodo-1H-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidine (151266-23-8) Specifications
MDL အရေအတွက် MFCD03787931
InChI Key ကို HQAIUXZORKJOJY-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 3-iodo-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidin-4-Amin
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ အဝါရောင်ဖျော့ granules
ထုပ်ပိုး glass ကို Bottle သ
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 261.026 g / mol
အပြုံး C1 = NC2 = NNC (= C2C (= N1) N) တို့ငါ
အရောင် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဖြူဖပ်ဖြူရောအဝါရောင်
အရည်ပျော်မှတ် 350 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit ။ )
assay ≥98.0% (HPLC, T) ကို
APICMO မှာကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်သင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine ပမာဏ synthesize ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် CGMP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့်စည်းမျဉ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ အောက်ကထုတ်ကုန်များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်:
ရုံ pyrazolo (3,4) pyrimidine အများစုလိုပဲဒီဓာတုအဆိုပါ catego ပိုင်ဆိုင်? heterocycles, inhibitors, halides, ဘေ့, ခြေစွပ်များနှင့်ပြန်လည်? lated တ္ထုများ၏ ries ။
ဓာတုနာမကိုအမှီ 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine
IUPAC name ကို 3-iodo-2H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidin-4-Amin
နာမ် · 4-အမိုင်နို-3-iodopyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine
· 3-iodo-4-Aminopyrazolo [3,4-ဃ] pyridine
· 4-အမိုင်နို-3-iodopyrazolo [3,4-ဃ] pyridine
· 3-iodopyrazolo [3,4-ဃ] pyriMidin-4-Amin
· 3-iodo-2H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidin-4-Amin
· 3-iodo-4-အမိုင်နို-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyridine
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 151266-23-8
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 261.026
ဖော်မြူလာအလေးချိန် (ဆ / mol) 261.03
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 260.951143
ဓာတုနှင့် 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine အလင်းတစ်ဦးမွငျ့မား sensitivity ကိုဖြစ်ပါတယ်။
covalent 1 ယူနစ်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင်အရေအတွက် -2ယူနစ်
လက်ခံသူအရေအတွက် -4ယူနစ်
rotate နှောင်ကြိုး 0
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine အဖြူရောင်အစိုင်အခဲသည်။ ဒါဟာအုပ်ချုပ်မှု၏လျှောက်လွှာများနှင့် Modes သာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ထိုကဲ့သို့သော Nano-အမှုန့်သို့မဟုတ် submicron အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်တည်ရှိ။
တွက်ချက် Properties ကို
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 260.951143
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 11
compound Canonicalized သည် ဟုတ်ကဲ့
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 80.5 တစ် ^ 2
XLogP3-AA ကို 1.1
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine များအတွက်ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း
Use of 4-Amino-3-Iodo-1H-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidine (151266-23-8)
FLT3-ITD ကအပြုသဘောစူးရှ myeloid သွေးကင်ဆာများအတွက်အစွမ်းထက်နှင့်နှုတ်မရရှိနိုင် FLT122 kinase inhibitor အဖြစ် CHMFL-FLT3-3 ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဓါတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ဒီထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဒါဟာအစခြင်အားဖြင့်ငှက်ဖျား၏ဂီယာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ inhibitors ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် PfCDPK4 (Plasmodium falciparum ကယ်လစီယမ်-မှီခိုပရိုတိန်း kinase IV) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဓါတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်လည်ပတ်သော။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးမ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, ထုတ်ကုန်အောက်ပါပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်:
ဆေးဝါး applications များ
Mishandling 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine ၏အန္တရာယ်များ
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကိုင်တွယ်ခံရဖို့သင့်၏။ သငျသညျ, အပေါငျးတို့သကြိုတင်ကာကွယ်မှုများစောငျ့ရှောကျကနျြးမာရေးအန္တရာယ်များကိုနားလည်သဖြင့်, ဓါတုဗေဒရဲ့အဆိပ်အတောက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်များ၏အစီအမံသင့်ပါတယ်။ ဤတွင်ဒီထုတ်ကုန်၏ဆင်းရဲသားကိုကိုင်တွယ်များ၏အန္တရာယ်ထုတ်ပြန်ချက်များတချို့ရှိနေပါတယ်။
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine နှင့်အတူဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
1 ။ အကာအကွယ်ပစ္စည်း
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine နှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို minimize လုပ်ဖို့သင့်လျော်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုဝတ်စုံဝတ်ဆင်။
HEPA filter များနှင့် Air-စင်ကြယ်စေသည့်အရာတစ်ခုနှင့်အတူအသက်ရှူကိရိယာကိုသုံးပါ
တစ်ဦး impervious ဖိနပ်များအပါအဝင်အပြည့်အဝဝတ်စုံနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်အဖုံးဖုံး
2 ။ အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ
3 ။ ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine (151266-23-8) သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလေဝင်လေထွက်ခန်း၌မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အလုပ်အပေါ်ထားသင့်ပါတယ်။
ရှူရှိုက်မိ၏အမှု၌, လုံလောက်သောလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းသောဧရိယာမှသားကောင်ကိုရွှေ့။ အသက်ရှူအတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်လျှင်, အောက်စီဂျင်ထောက်ခံမှုသုံးပြီးစဉ်းစားပါသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုရှာကြာလော့။
လုံလောက်သောရေအေးနှင့်အတူအကြောင်းကို 15 မိနစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခံတွင်းဆေးကြောပါ။ စားသုံးမှုကတည်းကအဆိပ်အတောက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်မဆိုပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာကြာလော့။
အကြောင်းကို 10 မိနစ်အလုံအလောက်ပြေးရေနှင့်အတူမျက်စိဆေး။ သင်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးရှိပါက, မျက်စိဆေးရှေ့တော်၌ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ တစ်ခုလုံးကိုဓါတုဗေဒထုတ်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ပိုမယားယံရှိ၏သည်အထိလက်မဆေးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ Continue ။
လုံလောကျရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာနှင့်အတူထိုဒေသတွင်ဆေး။ အဆိုပါယားယံဆက်ရှိနေသေးပါလျှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြာလော့။
4 ။ 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine (151266-23-8) ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ
သင့်လျော်သောအကာအကွယ်အရေပြားကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဂီယာ, မျက်နှာ, မကျြစိကိုဝတ်ဆင်
5 ။ ဘယ်အချိန်မှာမပေးအသုံးပြုမှုအတွက်
တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်း Store က
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူ access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံခြုံရာဌာန၌ဖွင့်သော့ခတ်
6 ။ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်
တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာကွန်တိန်နာအတွင်း 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine မဆိုအကြွင်းအကျန်တက်သော့ခတ်
တစ်စုပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူဧရိယာကို clean up
7 ။ သိုလှောင်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
သေချာ 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine တက်သော့ခတ်ပြီးတင်းကြပ်စွာတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းကောင်းကောင်းလေဝင်လေထွက်ဖြစ်ပေမယ့်အလင်းကန့်သတ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူသင့်ပါတယ်။
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine (151266-23-8) တင်းကြပ်စွာတဲ့ professional သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး၏အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်နေဖြင့်ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသုံးပြီးမည်သူမဆိုလူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်ဓာတုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏အန္တရာယ်ရှိသောသဘောသဘာဝနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်သင့်၏။
8 ။ မတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
မဆိုမီးကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါအဆိပ်သင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်မဆိုအန္တရာယ်များနှင့်ရှူရှိုက်မိပါ minimize လုပ်ဖို့အကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်ရန်သတိရပါ။ ဤရွေ့ကားဘေးထွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင် iodide တို့, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ပါဝင်နိုင်သည်။ မီးတောက်သတ်မှခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့မီးသတ်ဘူးအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါယိုဖိတ်မှုရေနုတ်မြောင်း, အပ်ချုပ်သူ, ဒါမှမဟုတ်ချုပ်ထားအချက်များထဲသို့ဝင်ခြင်းငှါအခွင့်မရှိကြနှင့်။ အဆိုပါအစိုင်အခဲသို့မဟုတ်အရည်ယိုဖိတ်စုပ်ယူ scooping အားဖြင့်အစက်အပြောက်ထရှင်းလင်းပါ။ မျက်နှာပြင်ကိုလျှော်ကြောင့်လေခတ်နှင့်အညီအဆိုပါယိုဖိတ်အကြောင်းအရာများကိုများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ဒီတာဝန်လုပ်နေသည့်အခါအမြဲတမ်းအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်။
9 ။ တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] အလင်း, အပူ, ဒါမှမဟုတ်အစိုဓာတ်ကိုထိတွေ့သည့်အခါ Pyrimidine မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေများသို့မဟုတ်အခြား oxidizing အေးဂျင့်မှထုတ်ကုန်များ၏ထိတွေ့မှုပြိုကွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ ဒါဟာအစခိုင်မာတဲ့အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်အက်ဆစ်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
10 ။ ဓာတုရှင်း
ဓာတု contents တွေကိုနှင့် 4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine ဒေသခံနိုင်ငံပိုင်နှုန်းအဖြစ်ကွန်တိန်နာများနှင့်ဓာတုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်း၏ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများပပျောက်။
11 ။ တင်ပို့သတင်းအချက်အလက်
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine (151266-23-8) မြေပြင်နှင့်ဝေဟင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
4-Amino-3-Iodo-1H-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidine (151266-23-8) Regulatory Information
အဆိုပါထုတ်ကုန်အားလုံးဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းလိုက်နာစောင့်ထိန်း။ ၎င်း၏အရေအတွက် Sara ခေါင်းစဉ် III ကို, အပိုင်း 302 နှင့် 313 ၏လိုအပ်ချက်များကိုချိုးဖောက်စေခြင်းငှါအရာ, တံခါးခုံထက်မပိုပါဘူး။
4-အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine (151266-23-8) တစ်ခုအမိန့်အောင်လုပ်နည်း
သင်သည်သင်၏သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ် application များအတွက် [3-D ကို] Pyrimidine အမိုင်နို-1-Iodo-3,4H-Pyrazolo ၏ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏလိုအပ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, Apicmo.com သင့်ကျောတယ်ပါပြီ။ ထုံးစံအမိန့်ဘို့ငါတို့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကဖွင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဇီဝနည်းပညာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားရေးစင်တာ, ဆေးပညာ၏အမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, PubChem, အမိုင်နို-3-Iodo-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine များအတွက်ဝင်းအကျဉ်းချုပ်, အပိုင်း 1- အပိုင်း 8 ။
အမေရိကန်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီ။ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ PL 94-469 ရုံး: Volume ကို2၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း။
Heterocycles ၏ဓာတုဗေဒ: structures များ, တုံ့ပြန်မှု, Synthesis နှင့် Applications ကို, Theophil Eicher, Siegfried Hauptmann, Andreas Speicher ဂျွန် Wiley နှင့်သား 50 စာမျက်နှာ-63